Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romanina – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romanina
1:1 Paul, mpanompon'i Jesosy Kristy, nantsoina ho Apôstôly, nisaraka ho amin'ny filazantsaran'Andriamanitra,
1:2 izay efa nampanantenainy rahateo, ny alalan 'ny Mpaminany, ao amin'ny Soratra Masina,
1:3 momba ny Zanany, izay natao ho azy avy amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo,
1:4 ny Zanak 'Andriamanitra, izay voalahatra ao amin'ny hatsaran-toetra araka ny Fanahin'ny fahamasinana avy amin'ny fitsanganana amin'ny maty, Tompontsika, dia Jesosy Kristy,
1:5 amin'ny alalan'ny Izay nandraisanay fahasoavana sy ny mah'Apostoly, noho ny anarany, fa ny hahatonga fanekena ny finoana any amin'ny jentilisa rehetra,
1:6 avy izay koa no nantsoin 'i Jesoa Kristy:
1:7 Ho an'izay rehetra any Roma, ny malalan'Andriamanitra sady, voantso ho olona masina. Aminareo anie ny fahasoavana, sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:8 tokoa, Misaotra an'Andriamanitro, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, aloha noho ny aminareo rehetra, satria ny finoanao dia ho nanambara manerana izao tontolo izao.
1:9 Fa Andriamanitra no vavolombelona, Izay tompoin'ny fanahiko amin'ny filazantsaran'ny Zanany, fa tsy manam-pitsaharana akory ny nitandrina ny fahatsiarovana anao
1:10 mandrakariva, raha mivavaka aho, mitalaho fa fomba, amin'ny fotoana, Mba manana nanan-karena dia, ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, ho avy any aminareo.
1:11 Fa maniry hahita anareo, ka mba hanome anareo ny fahasoavana ara-panahy iray mba hampahery anao,
1:12 manokana, mba ho nampionona miaraka aminareo amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana ifampizarana izay: ny finoanao sy ny ahy.
1:13 Ary tiako ho fantatrareo, rahalahy, fa efa matetika natao ho avy any aminareo, (na dia efa voasakana hatrany 'izao fotoana izao) ka dia mba hahazo vokatra atỳ aminareo koa, tahaka ny hafa koa va mba isan'ny jentilisa.
1:14 Ho an'ny Grika sy ny toetra, ny hendry sy ny adala, Trosa aho.
1:15 Koa ato anatiko misy bitsika hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma.
1:16 Fa tsy menatra ny Filazantsara. Fa herin'Andriamanitra ho famonjena ho an'ny mpino rehetra, ny Jiosy aloha, ary ny teny grika.
1:17 Fa ny fahamarinan 'Andriamanitra dia ambara ao izany, amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra: "Fa ny olo-marina noho ny finoana fiainana iray."
1:18 Fa ny fahatezeran'ny Fa aseho avy any an-danitra ny impiety rehetra sy ny tsy rariny eo amin'ireo olona izay hiaro tena eny ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny tsy rariny.
1:19 Fa inona no fantatra momba ny amin'Andriamanitra dia miseho ao aminy. Fa Andriamanitra efa miseho azy ho azy ireo.
1:20 Fa tsy hita maso ny zavatra momba azy natao miharihary, hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, rehefa fantatra amin'ny zavatra izay natao; toy izany koa ny hatsaran-toetra sy ny maha-Andriamanitra mandrakizay, loatra ka tsy misy fialan-tsiny.
1:21 Fa na dia nahalala an'Andriamanitra, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, na fisaorana. Fa tsy, Lasa nalemy ny eritreriny, ary ny adala fony nanamaizina.
1:22 Fa, raha manambara tena ho hendry, dia nanjary adala.
1:23 Ary Nifanome ny voninahitry ny Andriamanitra tsy mety simba noho ny endriky ny endriky ny olona mety lò, ary ny zava-manidina, sy ny biby manan-tongotra efatra, ary ny menarana.
1:24 Izany no antony, Andriamanitra nanolotra azy ho ny fanirian 'ny fony fanadiovana, ka ory ny tenany amin'ny fampietrena niresaka.
1:25 Ary nanakalo ny fahamarinan'Andriamanitra ho lainga. Ary ireo dia niankohoka ka nanompo ny voary, fa tsy ny Mpanao, Izay isaorana mandrakizay. Amen.
1:26 Noho io, Andriamanitra natolotro ho an'i mahamenatra firehetam-po. Ohatra, ny vehivavy efa nanakalo ny fanao amin'ny vatana noho ny fampiasana amin'izay tsy fanaony.
1:27 Ary toy izany koa, ny lahy koa, miala ny fanao amin'ny vehivavy, fa nandoro ny faniriany ho an'ny hafa: lahy manao amin'ny lehilahy izay baraka, ary ny fandraisana-pony ireo ny valiny izay voatery vokatry ny fahadisoany.
1:28 Ary satria izy ireo tsy hita ho manana an'Andriamanitra amin'ny fahalalana, Andriamanitra natolotro ho an'i fitondran-tena ratsy fitondran-tena ny fomba fisainana, ka mba manao izay zavatra tsy tokony hatao:
1:29 rehefa tanteraka feno ota rehetra, lolompo, fijangajangana, avarice, ny faharatsiana; feno fialonana, vonoan-olona, fifandirana, fitaka, na dia teo aza, fifosafosana;
1:30 mpanendrikendrika, feno fankahalana an'Andriamanitra, ratsy, miavonavona, tena manandratra, devisers ny ratsy, tsy mankatò ray aman-dreny,
1:31 adala, tsy mitoetra tsara; tsy pitiavana, tsy misy tsy fivadihana, tsy misy famindram-po.
1:32 ary izao, na dia nahafantatra ny fahamarinan 'Andriamanitra, no tsy nahalala fa ireo izay mandray andraikitra eo amin'ny fomba toy izany dia mendrika ny ho faty, Ary tsy izany ihany ireo izay manao ireo zavatra ireo, fa koa ireo izay manaiky ny zavatra atao.
2:1 Izany no antony, O olona, ny tsirairay avy aminareo izay mitsara dia tsy afa-tsiny. Fa ny dia izay mitsara hafa, no anamelohanao ny tenanao. Fa manaova toy izany izay mitsara.
2:2 Fa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina manohitra ireo izay manao izany zavatra izany.
2:3 Fa, O olona, Hianao, raha mitsara izay manao izany zavatra izany na ianao aza dia koa, araka ny hevitrao fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra?
2:4 Sa hamavoinao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny faharetana sy ny fandeferany? Tsy fantatrareo va fa ny hatsaram-panahy avy amin'Andriamanitra no miantso anao hibebaka?
2:5 Fa araka ny mafy sy mety mibebaka fo, ianao mitahiry fahatezerana ho anao, ho amin'ny andro fahatezerana sy ny fanambarana avy amin'ny marina fitsaran'Andriamanitra.
2:6 Fa hamaly ny tsirairay araka ny asany:
2:7 Ho an'ireo izay, araka faharetana asa tsara, mitady voninahitra sy laza ary tsi-fahalòvana, Azo antoka fa, Izy no hanome ny fiainana mandrakizay.
2:8 Fa ho an'ireo izay tia ady sady izay tsy sitrapon'Andriamanitra ny fahamarinana, fa raha tokony hatoky heloka, ihany no ampanodiaviny fisafoahana sy ny fahavinirana.
2:9 Fahoriana sy fahantrana ho eo aminy an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy: ny Jiosy aloha, ary koa ny teny grika.
2:10 Fa voninahitra sy laza ary fiadanana no ho an'ny rehetra izay manao ny tsara: ny Jiosy aloha, ary koa ny teny grika.
2:11 Fa tsy misy tavan'olona amin'Andriamanitra.
2:12 Fa na iza na iza nanota tsy nanan-dalàna, dia ho very tsy manana ny lalàna. Ary na iza na iza nanota ao amin'ny lalàna, kosa dia hotsaraina araka ny lalàna.
2:13 Fa tsy ny mpandre ny lalàna, izay no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa dia ny mpankatò ny lalàna no hohamarinina izay.
2:14 Fa raha ny jentilisa, izay tsy manana ny lalàna, , satria voajanahary ireo zavatra izay avy amin'ny lalàna, olona toy izany, tsy manana ny lalàna, dia lalàn-tenany ihany.
2:15 Fa izy ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, raha mbola mahatonga ny fieritreretany vavolombelona momba azy ireo, ary ny fisainany-pony ireo ihany koa ny miampanga na hiaro azy ireo,
2:16 amin 'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra takona ao amin'ny olona, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka ny filazantsarako.
2:17 Fa raha antsoina amin'ny anarany Jiosy, ary hitoetra eo amin'ny lalàna, ary ianareo hahita voninahitra an'Andriamanitra,
2:18 ary ianao dia efa nahalala ny sitrapony, ary maneho ny zava-mahasoa kokoa, satria efa nampianarina ny lalàna:
2:19 ianao no lasa matoky ao tenanao fa Hianao dia mpitarika ny jamba, fanazavana ho an'ireo izay ao amin'ny maizina,
2:20 mpampianatra ho an'ny adala, mpampianatra ny ankizy, satria manana karazana fahalalana sy ny fahamarinana ao amin'ny lalàna.
2:21 Vokatr'izany, izay ampianarinao ny hafa, nefa tsy mampianatra ny tenanao. Mitory ianao fa ny olona tsy tokony mangalatra, fa ianao mangalatra.
2:22 Miteny manohitra ny fanitsakitsaham-bady ianao, fa ianareo manitsakitsa-bady. Ianao zava-betaveta sampy, fa ianareo manao mandroba tempoly ihany.
2:23 Ianareo, dia ho voninahitra ao amin'ny lalàna, fa noho ny famadihana ny lalàna ianareo kosa mahafa-boninahitra an'Andriamanitra.
2:24 (Fa noho ny aminareo ny anaran 'Andriamanitra no efa itenenana ratsy any amin'ny jentilisa, araka ny voasoratra.)
2:25 tokoa, famorana mahasoa, raha mitandrina ny lalàna. Fa raha misy mpamadika ny lalàna, ny voafora lasa voafora.
2:26 Ary noho izany, raha ny tsy voafora mitandrina ny mpitsara ny lalàna, tsy izany tsy ny famorana ho isaina ho voafora?
2:27 Ary izay atao hoe, raha toetran'ny tsy voafora, mankatò ny lalàna, Tsy tokony hitsara anao, Izay ny soratra sy ny famorana dia amin'ny alalan'ny mpamadika ny lalàna?
2:28 Fa ny Jiosy izay tsy toa izany ivelany. Tsy ny hoe voafora izay toa izany ivelany, ao amin'ny nofo.
2:29 Fa ny Jiosy dia izay no tena miafina. Ary ny famorana dia amin'ny fo ao amin'ny Fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Fa ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra.
3:1 Koa dia, inona intsony ny Jiosy, na inona no ilaina ny famorana?
3:2 Be tamin'ny lafiny rehetra: Voalohany indrindra, Azo antoka fa, ny fahaiza-miteny, satria 'Andriamanitra no nomena azy ireo.
3:3 Ahoana anefa raha ny sasany tamin'izy ireo no tsy nino? Ny tsi-finoany va hanafoana ny finoana 'Andriamanitra? Aoka tsy mba toy izany!
3:4 Fa Andriamanitra marina, fa ny olona rehetra dia mamitaka; araka ny voasoratra: "Koa, izay mitady hohamarinina amin'ny teninao, ary Hanjaka rehefa manome ny rariny. "
3:5 Fa raha ny tsy rariny na dia manondro ny fahamarinan 'Andriamanitra, ahoana no holazainay? Mety Andriamanitra tsy rariny ny fahatezerana Amin?
3:6 (No lazaiko amin'izao olona teny.) Aoka tsy mba toy izany! Raha tsy izany, ahoana no fitsara izao tontolo izao ity?
3:7 Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa efa be, ny alalan 'ny fahadisoana rehetra, amin 'ny voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota toy izany?
3:8 Ary isika no tsy tokony hanao ratsy, mba tsara mety hiteraka? Fa izany no manala baraka, ary toy izany koa no milaza ny sasany hoy izahay:; ny fanamelohana fotsiny ihany.
3:9 Inona no atao hoe manaraka? Tokony hiezaka ny hanan-tombo mialoha ny azy ireo? Tsy izany mihitsy! Fa efa niampanga Jiosy sy ny jentilisa rehetra ho eo ambany ota,
3:10 araka ny voasoratra: "Tsy misy olona izay vao.
3:11 Tsy misy izay mahafantatra. Tsy misy izay mitady an'Andriamanitra.
3:12 Efa nania rehetra; miara-dia lasa tsy misy ilàna azy. Tsy misy izay manao ny tsara; tsy misy na dia iray aza.
3:13 Ny tendany fasana misokatra. Noho ny fiteny tsy fantatra, efa manao fitaka. Ny poizin'ny menarana no ao ambanin'ny molony.
3:14 Ny vavany Feno ozona sy fangidiana ny.
3:15 Ny tongony mimaona handatsa-drà.
3:16 Alahelo sy ny tsy fahasambarana no eo amin'ny alehany.
3:17 Ary ny lalan'ny fiadanana tsy fantany.
3:18 Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. "
3:19 Fa fantatsika fa na inona na inona ny lalàna miteny, dia miteny ho an 'ireo izay ao amin'ny lalàna, ka dia ny vava rehetra mba ho hangina sy manerana izao tontolo izao dia mety ho foto-kevitra ho an'Andriamanitra.
3:20 Fa eo anatrehany, dia tsy misy nofo hohamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa ny fahalalana ny ota avy amin'ny lalàna.
3:21 Fa ankehitriny, tsy misy ny lalàna, ny fahamarinan 'Andriamanitra, izay ny lalàna sy ny mpaminany dia nijoro ho vavolombelona, efa nanehoana.
3:22 Ary ny fahamarinan 'Andriamanitra, na dia ny finoana an'i Jesosy Kristy, ao rehetra ary ny zavatra rehetra izay mino Azy. Fa tsy misy hafa.
3:23 Fa efa nanota ny rehetra dia mila ny voninahitr'Andriamanitra.
3:24 Izany no hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy,
3:25 izay efa natolotra ho toy ny fanavotana, amin'ny alalan'ny finoana ny rany, ny nampiseho ny rariny ho famelana ny fahadisoana teo aloha,
3:26 sy ny fandeferany 'Andriamanitra, ny nampiseho ny rariny amin'izao andro, ka ny tenany mba ho roa ny Marina sy ny hanamarina na iza na iza no avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy.
3:27 Koa dia, aiza ny tena fisandratana? Efa nofoanana. Amin'ny alalan'ny inona no lalàna? Fa ny asa? Tsy misy, fa noho ny lalàn'ny finoana.
3:28 Fa mitsara ny olona mba hohamarinina noho ny finoana, tsy ny asan'ny lalàna.
3:29 No Andriamanitry ny Jiosy ihany fa tsy avy amin'ny jentilisa koa? Mifanohitra amin'izay aza, avy amin'ny jentilisa koa.
3:30 Fa iray ihany Andriamanitra, Izay manamarina voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana.
3:31 Moa ve isika avy eo manimba ny lalàna amin'ny finoana? Aoka tsy mba toy izany! Fa tsy, isika dia manao ny lalàna mijoro.
4:1 Koa dia, Inona ary no holazaintsika ho efa azon'i Abrahama efa tratra, izay no rainay araka ny nofo?
4:2 Fa raha no nanamarinana an'i Abrahama asa, dia hanana voninahitra, fa tsy amin'Andriamanitra.
4:3 Fa inona no lazain'ny Soratra Masina? "Abrama nino an'Andriamanitra, ary dia raisina ho azy ho rariny. "
4:4 Fa fa izay miasa, karama dia tsy isaina ho araka ny fahasoavana, fa araka ny trosa.
4:5 Na izany aza tena, fa izay tsy miasa, fa izay mino Azy Izay manamarina ny ratsy fanahy, dia ny finoany no raisina ho rariny, araka ny zava-kendren'ny ny fahasoavan'Andriamanitra.
4:6 Toy izany koa, Hoy koa Davida fa sambatra ny olona, izay mitondra ny rariny Andriamanitra tsy amin'ny asa:
4:7 "Sambatra izay voavela ny helokareo no voavela, ary izay fahotany efa nanarona.
4:8 Sambatra ny olona izay ny Tompo dia tsy isaina ny ota. "
4:9 Ve izany fahasambarana, avy eo, mijanona afa-tsy ny voafora, na dia izany na dia ao amin'ny tsy voafora? Fa lazaintsika fa ny finoana no malaza an'i Abrahama ho rariny.
4:10 Nefa ahoana no dia malaza? Tamin'izy efa voafora na tsy voafora? Tsy tamin'izy efa voafora, fa amin'ny tsy voafora.
4:11 Fa nahazo ny famantarana ny famorana ho toy ny mariky ny fahamarinan 'ny finoana izay raha tsy misy ny famorana, ka mba ho rain'ny olona rehetra izay mino raha tsy voafora, mantsy izy, mba ho malaza ihany koa ho azy ireo amin 'ny rariny,
4:12 ary mba ho rain'ny voafora, tsy ho an'ireo izay ny famorana, fa na dia ho an'ireo izay manaraka ny dian-tongotry ny finoana izay ao amin'ny voafora Abrahama razantsika.
4:13 Fa ny teny fikasana tamin'i Abrahama, sy ny taranany, fa handova izao tontolo izao, dia tsy lalàna, fa ny alalan 'ny fahamarinan' ny finoana.
4:14 Fa raha izay amin'ny lalàna no mpiara-mandova, ny finoana dia tonga foana tsy mitondra fanatitra sy ny teny fikasana dia nofoanana.
4:15 Fa ny lalàna dia miasa ny fahatezerana. Ary raha tsy misy lalàna, tsy misy lalàna-Mafana.
4:16 Noho io, dia avy amin'ny finoana araka ny fahasoavana fa ny teny fikasana dia antoka ho an'ny taranany rehetra, tsy ho an'ireo izay avy amin 'ny lalàna, fa koa ho an 'ireo izay avy amin'ny finoan'i Abrahama, izay ilay razantsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra,
4:17 in ninoany, izay mamelombelona ny maty sy miantso ireo zavatra izay tsy misy ho amin'ny fisiana. Fa voasoratra: "Izaho kosa hampitoetra anareo tahaka ny rain'ny firenena maro."
4:18 Ary nino, miaraka amin'ny fanantenana mihoatra noho fanantenana, ka dia mba ho rain'ny firenena maro, araka izay nolazaina taminy: "Izao no fara mandimby,."
4:19 Ka dia tsy nalemy finoana, na no nihevitra ny tenany ho efa maty (na izy dia efa ho zato taona), na ny kibon'i Saraha mba ho maty.
4:20 Ary avy eo, ao amin'ny Fampanantenana Andriamanitra, dia tsy nisalasala amin'ny fatokisana, fa izy kosa dia nitombo hery tamin'ny finoana, manome voninahitra an'Andriamanitra,
4:21 satria fantany fa tena tanteraka izay rehetra nampanantenainy, Izy ihany koa afaka manatanteraka.
4:22 Ary noho izany antony, dia raisina ho azy ho any rariny.
4:23 Ary izao no voasoratra, dia nisy raisina ho azy ho any rariny, tsy noho ny,
4:24 fa koa ho an'ny noho. Fa izy no hatao raisina ho antsika, dia isika izay mino Ilay nanangana Azy ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy tamin'ny maty,
4:25 izay natolotra noho ny fahadisoantsika, ary izay nitsangana indray ho fanamarinana antsika.
5:1 Noho izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana, Aoka isika ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
5:2 Fa Izy no ananantsika koa efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana, izay antsika tsy hivadika, sy ny voninahitra, amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra.
5:3 Ary tsy izany ihany fa, fa aoka isika hahita ny voninahitra ao amin'ny fahoriana, satria fantatsika fa ny fahoriana maneho faharetana,
5:4 ary ny faharetana mitondra any fizahan, nefa tena manaporofo Mitondra Fanantenana,
5:5 nefa ny fanantenana dia tsy mitombina, satria ny fitiavana an'Andriamanitra alatsaka mivoaka ao am-pontsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, izay efa nomena antsika.
5:6 Nefa nahoana no nataon'i Kristy, raha mbola marary izahay, amin'ny fotoana, miaritra ny fahafatesana ho an'ny ratsy fanahy?
5:7 Ary zara raha misy olona mety ho vonona ny ho faty noho ny rariny, ohatra, angamba mety misy olona sahy ho faty noho ny lehilahy tsara fanahy.
5:8 Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa, fony mbola mpanota isika, amin'ny fotoana,
5:9 Maty hamonjy antsika Kristy. Noho izany, satria efa nohamarinina ankehitriny noho ny rany, mainka izany no ho voavonjy amin'ny fahatezerana alalany.
5:10 Fa raha izahay nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny Zanany, fony mbola fahavalo izahay, mainka izany, rehefa nampihavanina, no hovonjena noho ny ainy.
5:11 Ary tsy izany ihany fa, fa izahay koa dia voninahitra ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, nahariana antsika nahazo fihavanana ankehitriny.
5:12 Noho izany, tahaka Avy tamin'ny olona iray no nidiran'ny ota ho amin'izao tontolo izao, ary noho ny fahotana, fahafatesana; toy izany koa ny fahafatesana nafindra tamin'ny olona rehetra, ho an'izay rehetra efa nanota.
5:13 Fa na dia eo anatrehan'ny lalàna, dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, fa ny ota tsy isaina raha ny lalàna dia tsy misy.
5:14 Kanefa ny fahafatesana nanjaka hatramin'i Adama ka hatramin'i Mosesy, na dia ireo izay tsy nanota, , naka ny endriky ny fandikan-dalàn 'i Adama, izay fanoharana 'Ilay ho avy.
5:15 Fa ny fanomezam-pahasoavana dia tsy tanteraka toy ny fandikan-dalàna. Fa na noho ny fahadisoana iray no, maro no maty, nefa mainka izany, noho ny fahasoavan'ny olona iray, Jesoa Kristy, manana ny fahasoavana sy fanomezana avy amin'Andriamanitra ny olona maro be.
5:16 Ary noho ny ota amin'ny alalan'ny iray dia tsy tanteraka toy ny fanomezana. Fa tokoa, ny fitsarana iray natao ho fahamelohana, fa ny fahasoavana amin'ny fahadisoana maro no ho fanamarinana.
5:17 Fa na, noho ny fahadisoana iray, nanjakan'ny fahafatesana noho ny iray, nefa dia toy izany no hitoeran'ny mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana, na ny fanomezam-pahasoavana sy ny rariny, hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny Anankiray Jesosy Kristy.
5:18 Noho izany, tahaka ny alalan 'ny fahadisoana ny iray, ny olona rehetra ho eo ambany fanamelohana dia voafafy teny, toy izany koa ny alalan 'ny fahamarinan' ny iray, ny olona rehetra lavo eo ambany fanamarinana ho amin'ny fiainana.
5:19 Fa, tahaka ny alalan 'ny tsy fankatoavana ny olona iray, maro no naorina ho mpanota, toy izany koa ny alalan 'ny fankatoavana ny olona iray, maro no hiorina eo toy fotsiny.
5:20 Ary ny lalàna dia niditra tamin'ny fomba izay fahadisoana mety hitombo. Fa aiza ireo fandikan-dalàna be dia be, fahasoavana no superabundant.
5:21 Koa dia, toy ny fahotana ho amin'ny fahafatesana nanjaka, toy izany koa mba hanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
6:1 Ka inona ary no holazaintsika? Tokony hitoetra ao amin'ny fahotana, mba hitomboan'ny fahasoavana?
6:2 Aoka tsy mba toy izany! Fa ahoana no izay efa maty ny amin'ny ota mbola miaina ao anatin'ny fahotana?
6:3 Tsy fantatrareo va fa antsika izay efa natao batisa ao amin'i Kristy Jesosy dia efa natao batisa ho amin'ny fahafatesany?
6:4 Fa amin'ny alalan'ny batisa dia efa nalevina taminy ho amin'ny fahafatesana, amin'izay mba, amin'ny fomba izay i Kristy nitsangana tamin'ny maty, ny voninahitry ny Ray, dia enga anie isika koa mandeha araka ny fiainam-baovao.
6:5 Fa raha nampiraisina, amin'ny endriky ny fahafatesany, toy izany koa no ho, amin'ny endriky ny fitsanganana amin'ny maty.
6:6 Fa fantatsika izany: fa ny tenanareo taloha efa nohomboana tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy, ka ny vatana izay avy amin'ny fahotana dia mety ho ringana, ary koa, ka mba tsy hanompoantsika ny ota intsony.
6:7 Fa izay efa maty dia hamarinina amin'ny fahotana.
6:8 Ary raha niara-maty amin'i Kristy, dia mino fa velona koa isika, dia niaraka tamin'i Kristy.
6:9 Fa fantatsika fa i Kristy, in nitsangana tamin'ny maty, mety tsy ho faty intsony: ny fahafatesana tsy manan-kery aminy.
6:10 Fa in toraka izay maty noho ny ota, dia maty indray mandeha monja. Fa amin'ny toraka izay velona, dia velona ho an'Andriamanitra.
6:11 Ary noho izany, tokony hihevitra ny tenanareo ho efa maty ny amin'ny ota tokoa, ary ho velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika.
6:12 Noho izany, aza avela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, toy izay hankatò ny faniriany.
6:13 Tsy tokony hanolotra ny faritra tenanareo ho fiadian 'ny heloka noho ny ota. Fa tsy, manolotra ny tenanareo ho an'Andriamanitra, toy ny hoe ianao no velona aorian'ny fahafatesana, dia manatera ny faritra tenanareo ho fiadian 'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra.
6:14 Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo. Fa tsy mba ambanin'ny lalàna, fa ambanin'ny fahasoavana.
6:15 Inona no atao hoe manaraka? Tokony manota isika satria tsy ambanin'ny lalàna, fa ambanin'ny fahasoavana? Aoka tsy mba toy izany!
6:16 Tsy fantatrareo va izay fanatitra ianao tena toy ny mpanompo eo ambany fankatoavana? Ianao aza dia andevon'ny na zovy na zovy no mankatò: na ny ota, ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana, amin 'ny rariny.
6:17 Fa isaorana anie Andriamanitra, fa, na dia nampiasaina mba ho mpanompon 'ny fahotana, ankehitriny ianao dia efa ny fonareo ho amin'ny endriky ny fampianarana ho any izay efa nandray.
6:18 Ary rehefa natao afaka amin'ny ota, efa tonga mpanompon'Andriamanitra ny rariny.
6:19 No lazaiko amin'izao olona teny noho ny fahalemen'ny nofonareo. Fa tahaka anareo nanolotra ny faritra ny tenanareo hanompo ny fahalotoana sy ny faharatsiana, noho ny heloka, dia tahaka izany koa ianao ankehitriny, dia nanolotra ny faritra ny tenanareo hanompo ny rariny, noho ny fanamasinana.
6:20 Fa na dia fahiny ny mpanompon'ny ota, efa tonga ny zanaky ny rariny.
6:21 Inona ary no vokatra anefa no mihazona tamin'izany andro izany, ao ireo zavatra momba izay mahamenatra anareo ankehitriny? Fa ny hiafaran'izany zavatra izany fahafatesana.
6:22 Na izany aza tena, rehefa natao afaka tamin'ny ota izao, ary rehefa natao mpanompon'Andriamanitra, no mihazona ny vokatra amin'ny fahamasinana, ary marina tokoa ny farany dia fiainana mandrakizay.
6:23 Fa ny tambin'ny ota dia ny fahafatesana. Fa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika.
7:1 Sa tsy fantatrareo, rahalahy, (ankehitriny aho miresaka amin'ny olona izay mahalala ny lalàna) fa ny lalàna dia manapaka ny olona ihany raha mbola velona?
7:2 Ohatra, ny vehivavy izay iharan'ny manambady dia maintsy araka ny lalàna raha ny vadiny fiainana. Fa rehefa maty ny vadiny, izy dia afaka amin'ny lalàn'ny vadiny.
7:3 Noho izany, raha mbola velona ny lahy, raha ny tamin'ny lehilahy hafa, dia tokony hatao hoe mpijangajanga. Fa rehefa maty ny vadiny, izy dia afaka amin'ny lalàn'ny vadiny, toy izany, raha ny tamin'ny lehilahy hafa, izy tsy mpanitsakitsa-bady.
7:4 Ary noho izany, ry rahalahy, ianao koa dia efa natao maty ny amin'ny lalàna, noho ny tenan'i Kristy,, mba ho iray hafa izay efa nitsangana tamin'ny maty, mba mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra.
7:5 Fa fony mbola tao amin'ny nofo, ny filan'ny fahotana, izay ambanin'ny lalàna, miasa ao anatin'ny vatantsika, mba hitondra vokatra ho amin'ny fahafatesana.
7:6 Fa ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàn'ny fahafatesana, izay natao izahay, ka izao izahay hanompo amin'ny fanahy nohavaozina, fa tsy amin'ny fomba tranainy, ny soratra.
7:7 Inona no tokony holazaintsika manaraka? No lalàna ny ota? Aoka tsy mba toy izany! Nefa tsy fantatro ny fahotana, raha tsy tamin'ny lalàna. Ohatra, Dia tsy tiako tsy ho fantatra momba mitsiriritra, raha tsy ny lalàna nanao hoe:: "Aza mitsiriritra."
7:8 fa ny ota, nahazo fahafahana amin'ny alalan'ny didy, nataony tao-zavatra samy amiko mitsiriritra. Fa raha misaraka ny lalàna, maty ny ota,.
7:9 Ankehitriny dia nipetraka elaela afa-tsy ny lalàna. Fa rehefa tonga ny didy, dia velona indray ny ota dia,
7:10 ka dia maty aho. Ary ny didy, izay ho amin'ny fiainana, dia tena hita fa nahatonga fahafatesana tamiko ho ahy.
7:11 noho ny ota, nahazo fahafahana amin'ny alalan'ny didy, nitaona ahy, ary, ny alalan 'ny lalàna, ota namono ahy.
7:12 Ary noho izany, ny lalàna mihitsy no masina tokoa, ary ny didy masina sy marina ary tsara.
7:13 Dia izay tsara natao ho amin'ny fahafatesana ho ahy? Aoka tsy mba toy izany! Fa ota, mba mba, fantatra amin'ny anarana hoe fahotana izay tsara, nanao izay tokony hahafaty ahy; ka ny fahotana, ny alalan 'ny didy, Mety ho lasa feno fahotana tafahoatra.
7:14 Fa fantatsika fa ny fanahy ny lalàna. Fa izaho kosa nofo, rehefa namidy ho andevon'ny ota.
7:15 Fa manao zavatra tsy azoko. Fa tsy manao ny tsara izay sitrako te-hanao. Fa ny ratsy izay halako no ataoko.
7:16 Noho izany, rehefa manao izay tsy te-hanao, Izaho no mifanaraka amin'ny lalàna, fa ny lalàna tsara.
7:17 Fa izaho dia tsy miasa araka ny lalàna, fa araka ny fahotana izay monina ato anatiko.
7:18 Fa fantatro fa izay tsara no tsy ho velona ato anatiko, izany hoe, ao anatin'ny nofoko. Fa ny fahavononana hanao ny tsara lainga akaiky ahy, fa ny fanatanterahana izany tsara, Tsy afaka tonga.
7:19 Fa tsy manao ny tsara izay sitrako te-hanao. Fa raha tokony, Izaho hanao ny ratsy izay tsy te-hanao.
7:20 Ary raha manao izay tsy vonona aho ny hanao, dia tsy izaho intsony no manao azy io no, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko.
7:21 Ary noho izany, I mahita ny lalàna, ny te hanao soa ao aho, na ratsy afa-tsy lainga akaiky ahy.
7:22 Fa Izaho hiravoravo amin'ny lalàn'Andriamanitra, araka ny olona anaty.
7:23 Fa takatro lalàna hafa ao anatin'ny vatako, miady amin'ny lalàn'ny saiko, ary nahasarika ahy tamin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny vatako.
7:24 Tsy faly ny olona fa Izaho no, Iza no hanafaka ahy amin'ity vatana ny fahafatesana?
7:25 Ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika! Noho izany, I manompo ny lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko; kosa amin'ny nofoko, ny lalàn'ny ota.
8:1 Noho izany, misy ankehitriny, tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy,, izay tsy mandeha araka ny nofo.
8:2 Fa ny lalàna 'ny Fanahin' ny fiainana ao amin'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana.
8:3 Fa na izany dia azo ambanin'ny lalàna, satria dia malemy ny nofo, Andriamanitra naniraka ny Zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy noho ny fahotana, mba manameloka ny ota tao amin'ny nofo,
8:4 ka ny fanamarinana ny lalàna mba ho tanteraka ao amintsika. Fa izahay dia tsy mandeha araka ny nofo, fa araka ny fanahy.
8:5 Ho an'ireo izay nanaiky ny nofo dia nahatsiaro ny zavatry ny nofo. Fa ireo izay mifanaraka amin'ny toe-tsaina dia nahatsiaro ny zavatry ny Fanahy.
8:6 Fa ny fahamalinana ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fahamalinana ny Fanahy kosa fiainana, sy fiadanana.
8:7 Ary ny fahendrena ny nofo dia inimical an'Andriamanitra. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra, tsy afaka ho.
8:8 Koa ireo izay ao amin'ny nofo dia tsy afaka ny sitrapon'Andriamanitra.
8:9 Ary ianareo dia tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny Fanahy, raha marina izany fa ny Fanahin 'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy tsy manana ny Fanahin'i Kristy, izy, Tsy natao ho azy.
8:10 Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, Ary ny tena maty tokoa, ny fahotana, fa ny Fanahy no tena velona, noho ny fanamarinana.
8:11 Ary raha ny Fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty fiainana ao anatinareo, dia Izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no hamelona koa ny vatanareo mety maty, amin'ny alalan'ny Fanahiny monina ao anatinareo.
8:12 Noho izany, rahalahy, Tsy trosa isika ho amin'ny nofo, ka ho velona araka ny nofo.
8:13 Fa raha velona araka ny nofo, ianao dia ho faty. Fa raha, amin'ny alalan'ny Fanahy, no amonoanareo ny asan'ny ny nofo, anao ho velona.
8:14 Fa izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra.
8:15 Ary ianao tsy nandray, indray, ny fanahin 'ny fanompoana ao amin'ny tahotra, fa efa nandray ny Fanahin 'ny fananganan-anaka, Izy no mitaraina: "Aba, Ray!"
8:16 Fa ny Fanahy no mahatonga vavolombelona ny amin'ny fanahintsika fa isika no zanakalahin'i Andriamanitra.
8:17 Fa raha isika lahy, dia isika ihany koa ny mpandova: Azo antoka sady mpandova an'Andriamanitra, fa mpiara-mandova amin'i Kristy, mbola amin'ny fomba izay, raha miara-miaritra aminy, isika, dia hiara-manam-boninahitra aminy.
8:18 Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao fotoana dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay ho avy izay haseho ao amintsika.
8:19 Fa ny mialoha ny zavaboary mialoha ny fanambarana ny zanak'Andriamanitra.
8:20 Fa ny zavaboary dia nampanekena ho zava-poana, tsy an-tsitrapo, fa noho ny iray izay nanao izany foto-kevitra, ho fanantenana.
8:21 Fa ny zava-manan'aina mihitsy, dia hiara-ho afaka amin'ny fanandevozana ny kolikoly, ho any amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra.
8:22 Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia mitaraina anatiny, toy ny hoe miteraka, na dia mandraka ankehitriny;
8:23 Ary tsy izany ihany ireo, fa koa ny tenantsika, satria mihazona ny voaloham-bokatry ny Fanahy. Fa izahay koa dia misento ato anatintsika, niandry ny fananganana antsika ho amin'ny zanak'Andriamanitra, ary ny fanavotana ny tenantsika.
8:24 Fa izahay no namonjena ny fanantenana. Fa ny fanantenana izay hita dia tsy mba fanantenana. Fa ny olona izay mahita zavatra, nahoana no mbola anantenan'ny?
8:25 Fa hatrizay manantena izay tsy hitantsika, dia miandry amin'ny faharetana.
8:26 Ary toy izany koa, ny Fanahy koa dia manampy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika, fa ny Fanahy no mangataka ho antsika amin'ny tsy hay ambara ny fisentoana.
8:27 Ary Izay mandinika ny fo no mahalala izay mitady ny Fanahy, satria manontany amin'ny anaran'ny ny olona masina araka an'Andriamanitra.
8:28 Ary fantatsika fa, ho an'ireo izay tia an'Andriamanitra, miara-miasa ny zava-drehetra ho tsara, ho an'ireo izay, araka ny fikasany, dia olona voantso sady masina.
8:29 Ho an'ireo izay fantany rahateo no, izy koa notendreny rahateo amin'ny fitiavana, mifanaraka amin'ny endrika amin'ny Zanany, ka dia mba ho Lahimatoa amin'ny rahalahy maro Izy.
8:30 Ary ireo izay notendreny rahateo amin'ny fitiavana, nantsoiny koa. Ary ireo izay nantsoiny, no nohamarininy koa. Ary ireo izay nohamarininy, nomeny voninahitra koa.
8:31 Noho izany, inona no tokony holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?
8:32 Izay tsy niaro na dia ny Zanany, fa nanolotra azy noho ny antsika rehetra, Ahoana no tsy izy koa, miaraka aminy, efa nanome antsika ny zavatra rehetra?
8:33 Iza no hanao hanendrikendrika ny olom-boafidy avy amin'Andriamanitra? Andriamanitra no Ilay manamarina;
8:34 iza no ilay manameloka? Kristy Jesosy, Izay efa maty, ary izay efa nitsangana indray koa tokoa, dia eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra, ary na dia ankehitriny mifona ho antsika.
8:35 Ary Inona no hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana? Sa fahantrana? Na mosary? Sa fitanjahana,? Sa loza? Na ny fanenjehana? Na ny sabatra?
8:36 Fa araka ny efa voasoratra: "Fa noho ny aminao, izahay Vonoina ho faty mandrakariva. Izahay hoe entina toy ny ondry hovonoina. "
8:37 Fa amin'izany rehetra izany isika, mandresy, noho ny azy izay efa tia antsika.
8:38 Fa Izaho no antoka fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely,, na ireo fanapahana, na hery, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, na hery,
8:39 na ny avo, na ny lalina, na inona na inona zavatra ary rehetra izao hafa, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika.
9:1 Izaho milaza ny marina ao amin'i Kristy; Fa tsy mandainga aho. Ny feon'ny fieritreretana dia manolotra fijoroana ho vavolombelona ho ahy ao amin'ny Fanahy Masina,
9:2 fa ato anatiko ny alahelo lehibe, ary misy mitohy hahalahelovako am-po.
9:3 Fa naniry aho fa ny tenako mba ho anathemized amin'ny Kristy, noho ny rahalahiko, izay havako araka ny nofo.
9:4 Ireo no ny Israelita, izay an'ny fananganana antsika ho zanaka, sy ny voninahitra sy ny fanekena, sy ny fanomezana sy ny fanarahana ny lalàna, ary ny teny fikasana.
9:5 Azy koa ny razana, ary avy izy ireo, araka ny nofo, no Kristy, Izay ambonin'izy ny zavatra rehetra, finaritra, ho an'ny mandrakizay. Amen.
9:6 Fa tsy hoe ny Tenin'Andriamanitra no maty. Fa tsy izay rehetra amin'ny Zanak'Isiraely dia ny Isiraely.
9:7 Ary tsy ny rehetra no zanakalahin'i ny taranak'i Abrahama: "Fa ny taranakao no azo hampiharina amin'ny Isaac."
9:8 Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ireo zanak 'Andriamanitra dia tsy ireo izay zanaky ny nofo, fa ny zanaky ny teny fikasana; ireo dia heverina ho ny taranaka.
9:9 Fa ny teny ny teny fikasana izao: "Hody amin'ny fotoana. Ary hisy zazalahy an'i Saraha. "
9:10 Ary tsy izy irery. Fa Rebecca koa, dia nanan'anaka tamin'ny Isaac raintsika, avy amin'ny asa iray,
9:11 rehefa ny ankizy mbola tsy teraka, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy (izany fa ny tanjon'ny 'Andriamanitra mba mifototra amin'ny ny safidy),
9:12 fa tsy noho ny asa, fa noho ny fiantsoana, dia nanao taminy hoe:: "Ny zokiny hanompo ny zandriny."
9:13 Dia toy izany koa voasoratra: "Efa tia an'i Jakoba, fa Esao no halako. "
9:14 Inona no tokony holazaintsika manaraka? Misy tsy rariny amin'Andriamanitra? Aoka tsy mba toy izany!
9:15 Fa hoy izy tamin'i Mosesy: "Izaho no hiantra an'izay I hiantra. Ary hateriko famindram-po ho an'izay famindram-po aho. "
9:16 Noho izany, izany dia tsy mifototra amin'ny ireo izay mifidy, na eo amin'ny ireo izay hanan-tombo, fa amin'Andriamanitra izay maka fo.
9:17 Fa hoy ny Soratra Masina ho an'ny Farao: "Izaho no nanaitra anao ho tanjona izany, mba hahazoako manambara ny heriko ianareo, ary mba ny anarako mba ho nanambara rehetra eto an-tany. "
9:18 Noho izany, maka fo ho an'izay sitrapony, ary na zovy na zovy manamafy izay sitrapony,.
9:19 Ary noho izany, ianao no hanao amiko: "Ary nahoana izy no mbola manome tsiny? Fa iza no manohitra ny sitrapony?"
9:20 O olona, iza moa ianao hanontany an'Andriamanitra? Ahoana no ahafahan'ny zavatra izay efa noforonina va hanao Ilay namorona azy: "Nahoana ianao no nanao ahy toy izao?"
9:21 Ary tsy ny mpanefy vilany manana ny fahefana amin'ny tanimanga hanaovana, avy amin'ny iray ihany fitaovana, tokoa, fanaka homem-boninahitra iray, nefa tena iray hafa ho afa-baraka?
9:22 Ahoana kosa raha Andriamanitra, te-haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny aza, niaritra, amin'ny faharetana be, fanaka mendrika fahatezerana, fa mety ny ho ringana,
9:23 ka dia mba hanehoana ny haren'ny voninahiny, ao ireo fanaka ireo ny famindram-po, izay efa voaomana ho voninahitra?
9:24 Ary dia toy izany koa ny olona amintsika izay efa antsoina koa hoe, tsy avy amin'ny Jiosy, fa na dia ny avy amin'ny jentilisa,
9:25 araka izay milaza ao amin'ny Hosea: "Hiantso ireo izay tsy oloko, 'Ny oloko,'Ary izay tsy malala, 'malala,'Ary izy izay tsy namindrana fo, 'Izay efa nahazo famindram-po.'
9:26 Ary izao no ho: any amin'ny tany izay voalaza tamin'ny azy ireo, 'Ianao no tsy oloko,'Ao no hatao hoe zanaky ny Andriamanitra velona. "
9:27 Ary Isaia niantso ho an'ny Isiraely: "Rehefa ny isan'ny Zanak'Isiraely dia tahaka ny fasika any an-dranomasina, misy sisa ihany no hovonjena.
9:28 Fa izy no hamita ny teniny, raha abbreviating azy-pahamarinana. Fa ny Tompo no hanatanterahana fohy teny ambonin'ny tany. "
9:29 Ary dia toy Isaia mialoha: "Raha tsy Jehovah, Tompon'ny maro, efa bequeathed zanany, dia ho lasa tahaka an'i Sodoma, ary ho efa natao mitovy amin'ny an'i Gomora. "
9:30 Inona no tokony holazaintsika manaraka? Ny jentilisa, izay tsy nanaraka ny rariny no nahazo ny rariny, dia ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana?.
9:31 Na izany aza tena, Isiraely, na dia manaraka ny lalàn'ny fahamarinana, Tsy tonga teo amin'ny lalàn'ny fahamarinana.
9:32 Nahoana no? Satria tsy nitady azy avy amin'ny finoana, fa toy ny hoe avy amin'ny asa. Fa tafintohina noho ny vato mahatafintohina,
9:33 araka ny voasoratra: "Indro, Aho mametraka vato mahatafintohina ao Ziona, sy vatolampy tantara ratsy. Fa na iza na iza mino Azy tsy ho menatra. "
10:1 rahalahy, Azo antoka fa ny sitrapon 'ny foko, ary ny fivavako ho an'Andriamanitra, dia ho azy ireo ho famonjena.
10:2 Fa manolotra vavolombelona amin'ireo, fa manana Mafana fo ho an'Andriamanitra, saingy tsy araka ny fahalalana.
10:3 Fa, satria tsy nahalala ny fahamarinan 'Andriamanitra, ka nitady hanamarina ny tenany ny rariny, izy ireo tsy nanaiky ny tenany ho ny fahamarinan 'Andriamanitra.
10:4 Fa ny faran'ny lalàna, Kristy, dia ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino.
10:5 Dia nosoratan'i Mosesy, momba ny fahamarinana izay avy amin'ny lalàna, fa ny olona izay efa nanao ny rariny ho velona ny rariny.
10:6 Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana miteny toy izany: Aza milaza ao am-ponao: "Iza no hiakatra any an-danitra?" (izany hoe, mba hampidina an'i Kristy);
10:7 "Ary iza no hidina any amin'ny lavaka tsy hita noanoa?" (izany hoe, miantso indray an'i Kristy tamin'ny maty).
10:8 Inona anefa no lazain'ny Soratra Masina? "Eo akaikinao, eo am-bavanao sy ao am-ponao. "Izao no teny ny amin'ny finoana, izay no mitory.
10:9 Fa raha manaiky amin'ny vavanao ny Tompo Jesosy, ary raha mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho voavonjy.
10:10 Fa amin'ny fo, inoantsika amin 'ny fahamarinana; ary amin'ny vava, fibabohana dia ho famonjena.
10:11 Fa hoy ny Soratra Masina: "Izay rehetra izay mino Azy tsy ho menatra."
10:12 Fa tsy misy hafa, na Jiosy na jentilisa. Fa ny Tompo dia iray ihany ambonin'izy rehetra, be dia be amin'ny izay rehetra miantso Azy.
10:13 Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena.
10:14 Ary amin'ny fomba ahoana dia ireo izay tsy nino Azy miantso Azy? Na amin'ny fomba ahoana dia ireo izay tsy mbola nandre ny azy hino Azy? Ary amin'ny fomba ahoana no fandre raha tsy mitory azy?
10:15 Ary tena, amin'ny fomba ahoana no fitory,, raha tsy efa naniraka, araka ny efa voasoratra: "Akory ny hatsaran'ny tongotr'iry mitondra mitory fihavanana, izay mitory ny tsara!"
10:16 Fa tsy ny rehetra no mankatò ny Filazantsara. Fa hoy i Isaia: "Tompo ô, iza no nino ny teny nampitondraina anay?"
10:17 Noho izany, ny finoana dia avy amin'ny fihainoana, ary ny tori dia avy amin'ny teny Kristy.
10:18 Fa hoy izaho:: Sao tsy nahare izy? Fa tokoa: "Ny feo efa naloaky amin'ny tany rehetra, Ary ny teniny hatramin'ny fetran'ny izao tontolo izao. "
10:19 Fa hoy izaho:: Moa ny Isiraely tsy mahalala? Voalohany, hoy i Mosesy: "Izaho dia hitari-dalana anareo ho amin'ny fifandrafiana amin'izay tsy firenena; teo afovoan'ny firenena adala, Izaho haniraka anao ho tezitra. "
10:20 Ary Isaia sahy milaza: "Izaho hita ny izay tsy nitady ahy aho. No nisehoako miharihary tamin'izao ireo tamin'izay tsy niantso ahy. "
10:21 Avy eo amin'ny Isiraely dia hoy: "Mandritra ny andro no efa naninjitra ny tanako ho any amin'ny firenena izay tsy mino ary iza no manohitra ahy."
11:1 Noho izany, miteny aho: Efa noroahina Andriamanitra ny olony? Aoka tsy mba toy izany! Fa I, koa, aho Israelita ny taranak'i Abrahama, avy tamin'ny firenen'i Benjamina.
11:2 Andriamanitra tsy noroahina ny olony, izay fantany rahateo no. Ary moa ve ianao tsy mahalala izay milaza ao amin'ny Soratra Masina Elia, ny fomba Miantso namely ny Isiraely?
11:3 "Tompo ô, izy no namono ny mpaminany. Izy ireo manakorontana ny alitara. Ary izaho irery ihany no sisa, ary izy ireo dia mitady ny aiko. "
11:4 Inona anefa no Andriamanitra valin'ny azy? "Efa nihazona ho ahy fito arivo lahy, izay tsy nandohalika teo anatrehan'i nanenjana ny Bala. "
11:5 Noho izany, Toy izany koa, indray amin'izao fotoana, misy sisa ihany izay efa voavonjy, araka ny safidy ny fahasoavana.
11:6 Ary raha avy amin'ny fahasoavana, dia tsy avy tamin'ny asa ankehitriny; raha tsy izany dia tsy fahasoavana maimaim-poana.
11:7 Inona no atao hoe manaraka? Inona Isiraely nitady, dia tsy nahazo. Fa ny olom-boafidy no nahazo izany. Ary tena, ireo olon-kafa efa jamba,
11:8 araka ny voasoratra: "Andriamanitra efa nanome azy fanahy fisalasalany: maso izay tsy hahita, sy sofina izay tsy handre, na dia mandraka androany. "
11:9 Ary hoy i Davida: "Aoka ny latabany ho toy ny fandrika, ary ny fitaka, ary ny fanafintohinana, ary ny famaliana ho azy ireo.
11:10 Aoka ny masony ho nanamaizina, mba tsy hahita, ary mba niankohoka teo an-damosiny mandrakariva. "
11:11 Noho izany, miteny aho: No hahatafintohina amin'ny fomba mba lavo? Aoka tsy mba toy izany! Fa tsy, araka ny fahatafintohinana, ny famonjena dia amin'ny jentilisa, mba ho mpifaninana ho azy ireo.
11:12 Ary raha ny fahadisoan'ny dia ny haren'izao tontolo izao, ary raha ny diminution dia ny haren'ny firenena, mainka fa ny hafenoany?
11:13 Fa lazaiko aminareo jentilisa: tokoa, raha mbola velona koa aho apostoly ho an'ny hafa firenena, Dia mankalaza ny fanompoana,
11:14 toy izany mba nampahatezitra ny fifampiandaniana, izay tahaka ny tenany ihany no, ary toy izany koa aho mba hamonjeko ny sasany aminy.
11:15 Fa raha ny fahavoazana dia ho amin'ny fampihavanana izao tontolo izao, Inona no mety ny fiverenana ho, afa-tsy ny fiainana amin'ny fahafatesana?
11:16 Fa raha ny voaloham-voankazo no nanamasinana, toy izany ihany koa dia manana ny rehetra. Ary raha masina ny fakany, dia, dia tahaka izany koa no sampany.
11:17 Ary raha ny sampany sasany notapahina, ary raha, maha-sampana oliva, dia natsofoka teo aminy, ary ho mpiombona ny faka sy ny tsiron'ny ny hazo oliva,
11:18 tsy manome voninahitra ny tenanao ho ambony noho ny sampany. Fa na dia voninahitra, tsy manohana ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao.
11:19 Noho izany, holazainao: Ny sampany notapahina, ka dia mba hatao grefy amin'ny.
11:20 tsara ampy. No nanapahana azy noho ny tsy finoana. Fa ianareo kosa hijanona eo ny finoana. Aza misafidy ny manandrana izay misandratra, fa raha tokony matahotra.
11:21 Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny tena sampana, angamba koa mba tsy hiantra anao.
11:22 Koa dia, mahita ny hatsaran-toetra sy ny fahasaro-pony. tokoa, amin'ny ireo izay efa lavo, misy fahasaro-po; fa ho anareo, misy ny hatsaram-pon 'Andriamanitra, raha tsy miala amin'ny zava-tsoa. Raha tsy izany, ianao koa dia tapaka.
11:23 Koa, raha tsy mitoetra ao amin'ny tsy finoana, izy ireo dia hatsofoka amin'ny. Fa Andriamanitra dia afaka ny manao grefy azy amin'ny indray.
11:24 Koa raha efa fongotra tamin'ny hazo oliva, izay amin'ny manan'aina ho anao, ary, mifanohitra amin'ny natiora, ianao natsofoka teo amin'ny hazo oliva tsara, mainka fa izay tena sampany no hatao grefy hatrany ny hazo oliva?
11:25 Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo, rahalahy, izany zava-miafina (fandrao toa hendry ihany no ho anareo) dia nisy jamba no nitranga teo amin'ny Israely, mandra-pahatongan'ny ny fahafenoan 'ny Jentilisa dia tonga.
11:26 Ary toy izany, ny Isiraely rehetra dia mety ho voavonjy, araka ny voasoratra: "Avy ao Ziona dia tonga izay manafaka, ary ho tonga impiety hiala Jacob.
11:27 Ary izao no ho ny fanekeko ho azy ireo, raha manaisotra ny fahotany. "
11:28 tokoa, araka ny Filazantsara, dia fahavalo izy noho ny aminareo. Fa araka ny fifidianana, malala indrindra izy ireo noho ny amin'ny ray.
11:29 Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny antso dia tsy misy nenina.
11:30 Ary tahaka anao koa, tamin'ny andro lasa, Tsy mino an'Andriamanitra, nefa ankehitriny efa nahazo famindram-po ianao noho ny tsi-finoany,
11:31 dia tahaka izany koa no ireo ankehitriny, tsy nanaiky, noho ny famindram-po, ka dia mba hahazo famindram-po koa.
11:32 Fa Andriamanitra efa fonosina olona rehetra ao amin'ny tsy finoana, mba hamindra fo rehetra.
11:33 Oh, ny halalin 'ny harena ny fahendrena sy ny fahalalana an'Andriamanitra! Inona no tsy takatry ny saina ny fitsarany, sy ny tsy hita lany ny lalany!
11:34 Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo? Ary iza no mpanolo-tsaina?
11:35 Ary iza no nanome azy aloha, mba hamaly ho nitrosa?
11:36 Fa avy aminy, ary amin'ny alalany, sady ao aminy ny zavatra rehetra. Izy no voninahitra, ho an'ny mandrakizay. Amen.
12:1 Ary noho izany, Miangavy anao aho, rahalahy, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho sorona velona, masina sy ankasitrahan'Andriamanitra, ny subservience ny saina.
12:2 Ary aza misafidy ny ho manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa kosa misafidy ny ho ao an-baovao fanavaozana ny saina, mba hampiseho izay no sitrapon'Andriamanitra: izay tsara, ary inona no ankasitrahana, ary inona no tonga lafatra.
12:3 Fa lazaiko, noho ny fahasoavana nomena ahy, ho an'izay rehetra eo aminareo: Hanandrana tsy mihoatra ny dia ilaina ny tsiro, fa hanandrana amin 'fahononan-tena sy araka izay efa nozaraina anjara amin'ny finoana ny olona tsirairay.
12:4 Fa toy, ao anatin'ny tena iray, ny ananantsika zavatra maro faritra, na ny faritra rehetra tsy manana anjara asa mitovy,
12:5 dia tahaka izany koa no, na dia maro, dia tena iray ihany ao amin'i Kristy, ary ny tsirairay dia anjara, ny iray amin'ireo hafa.
12:6 Ary isika samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa, araka ny fahasoavana izay nomena antsika: raha faminaniana, nanaiky ny mahay mandanjalanja ny finoana;
12:7 raha fanompoana amin'ny fiangonana, amin'ny fanompoam-pivavahana; raha mampianatra, ao amin'ny Fotopampianarana;
12:8 izay mananatra, in fananarana; izay manome, in fahatsorana; izay mitantana, amin'ny fampiharana; izay mamindra fo, in-kafaliana.
12:9 Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsi fahadisoana rehetra: mankahala ny ratsy, hifikitra amin'ny tsara,
12:10 mifankatia amin'ny pirahalahiana fiantrana, haben'ny samy ho fanomezam-boninahitra:
12:11 amin'ny fampiharana, Tsy kamo; am-panahy, ary aoka hafana fo; fanompoana ny Tompo;
12:12 amin'ny fanantenana, faly; amin'ny fahoriana, maharitra; amin'ny vavaka, mandrakizay-vonona;
12:13 ao ny zava-tsarotra ny olona masina, mizara; in vahiny, hihaino.
12:14 Misaora izay manenjika anareo: misaora, ary aza manozona.
12:15 Miaraha mifaly izay faly. Miaraha mitomany amin'izay no nitomany.
12:16 Hiray saina ny hafa: tsy savoring izay dia misandratra, fa amin'ny fanetren-tena nanaiky. Aza mifidy ny toa fahendrena ny tenanao.
12:17 Mamalia ratsy na amin'iza na amin'iza kosa hanisy ratsy. Manome zavatra tsara, tsy eo imason'ny 'Andriamanitra, fa koa eo imason'ny olona rehetra.
12:18 Raha azo atao, Raha mbola afaka ianao, Ho tsara fihavanana amin'ny olona rehetra.
12:19 Aza miaro ny tenanareo, tiany indrindra ireo. Fa tsy, niala tsy ho fahatezerana. Fa voasoratra: "Ahy ny famaliana. Homeko famaizana, hoy Jehovah. "
12:20 Raha noana ny fahavalonao dia, omeo hanina izy; raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny. Fa raha manao izany, ianao, dia hanambatra vainafo eo an-dohany.
12:21 Aza avela handresy ny ratsy ny, fa Mandresy ny ratsy amin'ny alalan'ny tsara.
13:1 Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny manam-pahefana ambony. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra sy ireo izay notendrena Andriamanitra.
13:2 Ary noho izany, na iza na iza manohitra ny fahefana, manohitra ny zavatra efa natokan 'Andriamanitra. Ary ireo izay manohitra dia mahazo fanamelohana ho an'ny tenany.
13:3 Fa ny mpitondra dia tsy loharanom-tahotra ny olona miasa tsara, fa ho an'ireo izay manisy ratsy. Ary kokoa ve ianao tsy hatahotra ny fahefana? Avy eo manao ny tsara, ary dia hahazo dera avy aminy.
13:4 Fa Izy dia mpanompo 'Andriamanitra ho anareo ho tsara. Fa raha manao ny ratsy, matahotra. Fa tsy misy antony fa mitondra sabatra. Fa Izy no mpanompo 'Andriamanitra; dia mpamaly handatsaka handatsaka fahatezerana na zovy na zovy manao ratsy.
13:5 Izany no antony, dia ilaina ho foto-kevitra, tsy noho ny fahatezerana fotsiny, fa koa noho ny feon'ny fieritreretana.
13:6 Noho izany, dia tsy maintsy manolotra ihany koa ny hetra. Fa izy ireo ny mpanompon'Andriamanitra, manompo azy eto amin'ity.
13:7 Noho izany, Aloavy amin'izy rehetra izay rehetra nitrosa. hetra, ny izay efa hetra dia tokony; vola miditra, izay vola miditra dia vokatry; tahotra, izay dia vokatry ny tahotra; voninahitra, ho an'izay tokony hohajaina dia vokatry.
13:8 Tokony trosa na inona na inona ny olona, afa-tsy mba hifankatia. Fa na iza na iza tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna.
13:9 Ohatra: Aza maka vadin'olona. Aza mamono. Aza mangalatra. Aza miteny vavolombelona mandainga. Aza mitsiriritra. Ary raha misy didy hafa rehetra, izany no fintinina amin'ny teny ity: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
13:10 Ny fitiavana ny mpiara-belona no manisy ratsy. Noho izany, ny fitiavana dia ny plenitude ny lalàna.
13:11 Ary fantatsika ny andro ankehitriny izao, fa izao no ora ho antsika ny mifoha amin'ny torimasony. Fa efa famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika.
13:12 Ny alina lasa, ary ny andro hanatonan'ny. Noho izany, aoka isika nandatsaka manokana ny asan 'ny maizina, ary hitafy ny fiadian'ny mazava.
13:13 Aoka isika hitondra tena tsara, tahaka ny any amin'ny mazava, tsy amin'ny carousing sy ny fahamamoana, tsy amin'ny promiscuity sy ny fitondran-tena maloto, tsy amin'ny fifandirana sy ny fialonana.
13:14 Fa tsy, hitafy ny Tompo Jesoa Kristy, ary aza miahy ny amin'ny nofo amin'ny faniriany.
14:1 Fa manaiky ireo izay malemy finoana, tsy niady hevitra momba ny hevitra.
14:2 Fa olona iray mino fa mahazo mihinana ny zava-drehetra, Fa raha ny anankiray kosa malemy, aoka izy hihinana zavamaniry.
14:3 Ary izay mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana. Ary izay tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra no efa nandray azy.
14:4 Iza moa ianao no hitsara ny mpanompon'ny hafa? Ary mijoro na latsaka eo amin'ny Tompo. Fa izy no ho eo. Fa Andriamanitra mahay mampitoetra azy ny Tompo.
14:5 Fa olona iray mahay manavaka iray taona avy manaraka. Fa iray hafa rehetra dia mahafantatra ny ho mandrakizay. Aoka tsy hisy olona vokatry araka ny saina.
14:6 Izay mahafantatra ny taona, fantany fa ny Tompo. Ary izay mihinana, mihinana ho an'ny Tompo; satria misaotra an'Andriamanitra. Ary izay tsy mihinana, tsy mihinana ho an'ny Tompo, Ary misaotra an'Andriamanitra.
14:7 Fa tsy misy amintsika velona ho an'ny tenany, ary tsy misy maty ho an'ny tenany isika.
14:8 Fa raha velona, miaina ho an'ny Tompo, ary raha maty isika, dia ho faty ho an'ny Tompo. Noho izany, na velona na maty isika, dia an'ny Tompo.
14:9 Fa Kristy maty sy nitsangana ho amin'izany tanjona: mba ho ny mpitondra na ny maty sy ny velona.
14:10 Koa dia, nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Na nahoana no manao tsinontsinona ny rahalahinao? Fa isika rehetra dia samy hijoro eo anatrehan'ny fitsaran'i Kristy.
14:11 Fa voasoratra: "Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, ny lohalika tsirairay dia manenjana amiko, Ary ny lela rehetra hidera an'Andriamanitra. "
14:12 Ary noho izany, tsirairay amintsika dia hanatitra fanazavana mikasika ny tenany avy isika rehetra.
14:13 Noho izany, intsony tokony hitsara ny hafa. Fa tsy, hitsara amin ny bebe kokoa: mba tsy mametraka sakana eo anoloan'ny rahalahinao, na hitarika azy lalan-diso.
14:14 fantatro, amin-toky ny Tompo Jesoa, fa tsy misy zavatra maloto ho azy sy. Fa ho an'izay mihevitra zavatra ho maloto, dia maloto ho azy.
14:15 Fa raha mampalahelo ny rahalahinao noho ny sakafo, ankehitriny ianao dia tsy mandeha araka ny fitiavana. Aza avela ny sakafo handringana azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy.
14:16 Noho izany, izay tsara ho antsika tsy tokony ho antony mahatonga ny fitenenan-dratsy.
14:17 Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny zava-pisotro, fa ny rariny sy fiadanana ary fifaliana, ao amin'ny Fanahy Masina.
14:18 Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany, mampifaly an'Andriamanitra ary voaporofo eo anatrehan'ny olona.
14:19 Ary noho izany, Aoka isika hiezaka hitady izay zavatra fiadanana, ka dia aoka isika hanao ny zavatra izay ho amin'ny fampandrosoana ny iray hafa.
14:20 Aza ho vonona ny handrava ny asan'Andriamanitra noho ny sakafo. tokoa, ny zavatra rehetra madio. Fa misy ratsy ho an'ny olona izay mihinana manafintohina ny.
14:21 Tsara ny hijanona tsy mihinana hena, ary tsy hisotro divay, ary na inona na inona izay malaky tafintohina ny rahalahinao, na hofitahina, na ny malemy.
14:22 Manana finoana? Tsy ny anao, ka hazòny izy eo anoloan 'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay heriny, izay pitsapana.
14:23 Fa izay mahay manavaka, raha homana, dia meloka, satria tsy avy amin'ny finoana. Fa ny zavatra rehetra tsy avy amin'ny finoana dia fahotana.
15:1 Fa isika izay matanjaka dia tsy maintsy mitondra miaraka amin'ny fahosana ny malemy, fa tsy mba hahafaly ny tenantsika ihany.
15:2 Ianareo tsirairay avy dia tokony hahafaly ny namantsika ho tsara, hananganana.
15:3 Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra: "Ny latsa nataon'izay nandatsa anao teo amboniko."
15:4 Fa izay rehetra nosoratana, dia nosoratana mba hampianatra antsika, amin'izay mba, amin'ny faharetana sy ny fampiononana ny Soratra Masina, hananantsika ny fanantenana.
15:5 Ho tahaka izany anie ny Andriamanitry ny faharetana sy fampiononana anie hahatonga anareo ho iray hanaiky ny hafa, araka Jesosy Kristy,
15:6 amin'izay mba, miaraka amin'ny vava iray, mba mankalaza an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika.
15:7 Izany no antony, manaiky ny hafa, tahaka ny Kristy aza efa nanaiky anao, ao amin'ny voninahitra 'Andriamanitra.
15:8 Fa hanambara fa i Kristy Jesosy no minisitry ny famorana noho ny fahamarinana 'Andriamanitra, mba hahatò ny teny fikasana tamin'ny razana,
15:9 ary ny jentilisa no hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famindram-pony, araka ny voasoratra: "Noho io, No hiderako Anao any amin'ny jentilisa, Tompo O, ary Izaho no hankalazako ny anaranao. "
15:10 Ary indray, hoy izy: "Mifalia, O jentilisa, miaraka amin'ny vahoakany. "
15:11 Ary indray: "Ny hafa firenena, midera ny Tompo; sy ny vahoaka rehetra, hankalaza azy. "
15:12 Ary indray, hoy i Isaia: "Tsy izany ny solofon'i Jese, ary izy dia tsy hitsangana hanapaka ny jentilisa, ary ao aminy no fanantenana amin'ny jentilisa. "
15:13 Ho tahaka izany anie ny Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin'ny fifaliana rehetra sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana sy ny herin 'ny Fanahy Masina.
15:14 Anefa aho ny aminareo ihany koa ny sasany, ry rahalahy, fa ianareo koa efa feno fitiavana, vita ny fahalalana rehetra, mba afaka mifananatra hafa.
15:15 Fa ny nanoratako taminareo, rahalahy, tamim-pahasahiana kokoa noho ny olon-kafa, toy ny hoe miantso anao an-tsaina indray, noho ny fahasoavana izay nomena ahy avy amin 'Andriamanitra,
15:16 ka mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy any amin'ny jentilisa, manamasina ny filazantsaran'Andriamanitra, mba fa ny fanatitra hohanina 'ny Jentilisa mba ho ekena ary mety hohamasinina amin'ny Fanahy Masina.
15:17 Noho izany, Manana voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy eo anatrehan'Andriamanitra.
15:18 Noho izany dia tsy sahy miresaka momba izany zavatra izany, izay Kristy, dia tsy miasa amin'ny ahy, amin 'ny fankatoavana ny jentilisa, amin'ny teny sy ny atao,
15:19 amin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, amin'ny alalan'ny herin'ny Fanahy Masina. Fa toy izany, avy tany Jerosalema, mandritra ny manodidina azy, hatrany ILYRIKIONA, Izaho efa nampanan-karena ny Filazantsaran'i Kristy.
15:20 Ary noho izany dia efa nitory Filazantsara ity, tsy eo amin'izay Kristy dia fantatra amin'ny anarany, fandrao hanao teo ambonin'ny fanorenan'ny hafa,
15:21 fa araka ny voasoratra: "Ireo izay tsy nambara izy dia hahita, ary ireo izay tsy nandre no hahafantatra. "
15:22 Ary noho izany koa, Indrindra aho voasakana ao hankany aminareo, ary efa nisakana mandra-pahatongan'ny 'izao fotoana izao.
15:23 Kanefa tena ankehitriny, satria tsy misy toerana hafa ao amin'ireo faritra, ary nony efa lehibe nanana faniriana ho tonga aminao nandritra ny taona maro,
15:24 rehefa manomboka niainga teo amin'ny diany ho any Espaina, manantena aho fa, tahaka ny handalo, Mba mahita anao, ary mba ho voatarika niala teo Ianao, taorian'ny voalohany rehefa nitondra vokatra atỳ aminareo.
15:25 Fa manaraka dia niainga ho any Jerosalema, mba hanompo ny olona masina.
15:26 Fa ny an'i Makedonia sy Akaia dia nanapa-kevitra ny hanao famoriam-bola ho an 'ireo ny malahelo amin'ny olona masina, izay any Jerosalema.
15:27 Ary izany no sitraky azy ireo, satria izy no eo amin'ny trosa. Fa, satria ny hafa firenena efa anisan'ny nahazo ny ny zavatra ara-panahy, izy ireo kosa mba tokony hanao fanompoam-pivavahana ho azy ireo amin'ny zavatra tontolo izao.
15:28 Noho izany, rehefa vitako io asa io, ka entina ho azy ireo izany vokatra izany, Dia hametraka avy, ny fomba anao, ny Espaina.
15:29 Ary fantatro fa raha tonga any aminareo aho, dia tonga amin 'ny be dia be ny fitahiana avy amin'ny Filazantsaran'i Kristy.
15:30 Noho izany, Miangavy anao aho, rahalahy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary na ny fitiavana avy amin'ny Fanahy Masina, mba manampy ahy amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho an'ny eo an-tanako,
15:31 ka mba ho afaka amin'ny tsy nahatoky, izay any Jodia, ary toy izany koa ny fanatitra hohanina ny fanompoana mba hankasitrahan'ny ny olona masina tany Jerosalema.
15:32 Tahaka izany anie no avy any aminareo amin'ny fifaliana, ny alalan 'ny sitrapon' Andriamanitra, ary toy izany koa mamelà ahy hisy hiainako tsara aminao.
15:33 Ary enga anie ny Andriamanitry ny fiadanana anie ho aminareo rehetra. Amen.
16:1 Ary ankehitriny izaho manolotra anareo anabavinay Phoebe, izay eo amin'ny fanompoana ny fiangonana, izay any Kenkrea,
16:2 mba horaisinareo ao amin'ny Tompo miaraka amin'ny fahamendrehana ny olona masina, ary mba ho fanampiana azy amin'ny asa na inona na inona izy dia tokony hanana anareo. Fa ny tenany koa izy nanampy olona maro, ary ny tenako ihany koa.
16:3 Veloma amin'i Prisila sy Akoila, ny mpanampy ao amin'i Kristy Jesosy,
16:4 izay efa nanao vivery ny vozon'ny ho an'ny fiainako, fa izay anaovako fisaorana, tsy izaho irery, fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa;
16:5 Ary veloma amin'ny fiangonana ao an-tranony. veloma amin'i Epaineto, malalako, Izay eo amin'ny voaloham-bokatr'i Asia ao amin'i Kristy.
16:6 veloma amin'i Maria, izay nikely aina fatratra eo aminareo.
16:7 Veloma amin'i Androniko sy Junias, havako sy ny mpiara-babo, izay ambony eo amin'ny Apostoly, ary izay ao amin'i Kristy talohan'ny ahy.
16:8 koa Ampliato, malala indrindra ho ahy ao amin'ny Tompo.
16:9 veloma amin'i Orbano, ny mpanampy ao amin'i Kristy Jesosy, ary Stachys, malalako.
16:10 veloma Apelles, izay efa notsapaina ao amin'i Kristy.
16:11 Manaova veloma izay rehetra dia avy amin'ny ankohonan'i Aristobolo. veloma amin'i Heroda, havako. Manaova veloma izay rehetra fa amin'ny mpianakavin'ny ny Narcissus, izay ao amin'ny Tompo.
16:12 Veloma amin'i Tryfena sy Tryfosa, izay mikely aina ao amin'ny Tompo. veloma amin'i Persy, tena malala, izay nikely aina fatratra ao amin'ny Tompo.
16:13 veloma amin'i Rofosy, olom-boafidiny ao amin'ny Tompo, ary amin'ny reniny sy reniko.
16:14 veloma any amin'i Asinkrito, Flegona, Herma, Patroba, Hermes, sy ny rahalahy izay ao aminy.
16:15 Veloma amin'i Filologo sy Julia, Nerea sy ny anabaviny, sy Olympa, ary ny olona masina rehetra izay ao aminy.
16:16 Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Ny fiangonana rehetra an'i Kristy manao veloma anareo.
16:17 Fa Miangavy anao aho, rahalahy, mba mamantatra ny amin'izay mahatonga ny fisaraham-bazana sy ny fahatafintohinana tsy araka ny fampianarana izay nianaranao, ary ny fialana amin'ny azy ireo.
16:18 Fa olona toy ireo tsy manompo an'i Kristy Tompontsika,, fa ny tenanareo anatiny, ary, mahafinaritra amin'ny alalan'ny teny sy ny mahay mandaha-teny, dia hamitaka ny fon 'ny tsy manan-tsiny.
16:19 Fa ny fankatoavana dia efa nampahalalain amin'ny tany rehetra. Ary noho izany, Dia mifaly amin'ny aminareo. Fa tiako ho hendry amin'izay tsara, sy tsotra amin-javatra ratsy.
16:20 Ary enga anie ny Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an'i Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika dia ao aminareo.
16:21 Timothy, mpiara mpiasa, veloma anareo, sy Losio sy Jasona ary Sosipatro, havako.
16:22 I, fahatelo, izay nanoratra ity epistily ity, manao veloma anareo ao amin'ny Tompo.
16:23 Gaio, ny miaramilany, ary ny fiangonana iray manontolo, veloma anareo. Erasto, ny mpitahiry vola ao an-tanàna, veloma anareo, ary Quartus, ny rahalahy iray.
16:24 Anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho aminareo rehetra. Amen.
16:25 Fa ho an'izay mahay hampiorina anareo araka ny filazantsarako sy ny fitoriana an'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehoana ny zava-niafina izay efa nafenina fotoana ireo asa fanasoavana,
16:26 (izay ankehitriny efa mazava noho ny voasoratry ny mpaminany, araka ny didy ny ny Andriamanitra mandrakizay, amin 'ny hahatonga fanekena ny finoana) izay natao fantatra any amin'ny jentilisa rehetra:
16:27 ho an'Andriamanitra, izay ihany no hendry, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho Azy anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.